Shuruudaha Guurka Noorway | Safarka Absolut
Daniel | | Norwey
Sababo badan oo kala duwan awgood, waxaa jira lamaanayaal badan oo raba ku guursado Norway. Waxaan ka hadleynaa lamaanayaasha doonaya inay nolol cusub ka wada bilaabaan wadanka Scandinavian-ka ama iyaguba durbaba halkaas ku nool oo go’aansada inay qaabeeyaan xaaladooda. Waxa kale oo jira lammaane jacayl ka kala yimid dalal kale oo ku riyooda aroos meel kale oo qurxoon, qurux badan oo kacsan: dhulkii fjords.
Dhamaantood waxay aad u xiiseyn doonaan macluumaadka aan maanta la imaaneyno. Waan dib u eegi doonnaa dhinacyada sharciga iyo xafiiska shaqada loo baahan yahay in lagu guursado Norway iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhaqamada iyo adeegsiga ku xidhan xafladan. Ujeeddadu waxay tahay in wax walba ay si wanaagsan u socdaan maalintan farxadda leh.
1 Shuruudaha sharciga
1.1 Guurka dhex-dhexaadka ah
2 Guurka Noorway: dhaqanada iyo dhaqanka
2.1 Dhar iyo dhar
2.3 Cibaadooyinka nuptial
Lammaanaha doonaya inay ku guursadaan dhulka Noorway waa inay dhammaystiraan habraacyada soo socda:
Ku xisaabtam labadaba baasaboorka xoog ku leh oo leh shahaadooyinka dhalashada ansax ah
Ku darso a liisanka guurka ee waddanka asalka (shahaadada hal xaalad ama, haddii ay khuseyso, furiin ama geerida xaaska marka laga hadlayo carmalladda iyo carmallada) si loo caddeeyo in aysan jirin wax carqalado ah oo loogu dabaal dagayo guurka.
La xiriir maxkamadda ee degmada u dhiganta meesha xiriiriyaha lagu qaban doono si loo helo a ruqsadda guurka ee ay soo saartay mas'uuliyiinta. Nidaamkani wuxuu qaadanayaa qiyaastii laba toddobaad, haddii aysan jirin duruufo aan caadi ahayn. Si aad u hesho oggolaanshahan waa inaad bixisaa lacag yar.
Waa wax iska caadi ah in dadka doonaya inay ku guursadaan Norwey aysan joogin wadanka si ay u fuliyaan dhamaan nidaamyadan. Sidoo kale ma haystaan ​​lambar aqoonsi shaqsiyeed oo Norwey ah. Xaaladahaas oo kale, waa inaad marka hore u tagtaa Xafiiska Diiwaanka Qaranka (Sentralkontor oo loogu talagalay folkeregistrering, af Noorwiiji ah) oo xarunteedu tahay caasimada dalka, Oslo. Kani waa degelkooda rasmiga ah: skateetaten.no.
Nidaamka xafladaha guurka madaniga ah ee Norwey waxaa fuliya nootaayo dadweyne. Marka laga hadlayo muwaadiniinta ajnabiga ah, sida ugu dhaqsaha badan uguna raaxada badan ee lagu fulin karo dhamaan nidaamyadan xafiis ee xafiis waa in marka hore lala xiriiro safaarada Norway ee wadanka ay degan yihiin labada lamaane.
Guurka dhex-dhexaadka ah
Norwey waa mid kamid ah wadamada ugu deeqsi iyo furfuran aduunka. Horaantii bishii Janaayo 2009, waxay wax ka bedeshay sharciga guurka si loogu waafajiyo baahiyaha bulshada ee ku baaqaya in la aqoonsado sharci dhammaan noocyada lamaanaha.
Tan iyo markaas, mahadnaqa isbeddelada sharciga, guurka ayaa leh Jinsiga dhexdhexaadka ah Si kale haddii loo dhigo, dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah in la guursado waa isku mid, iyadoon loo eegin haddii ay yihiin kuwa isku jinsi ah ama jinsi kale ah.
Guurka Noorway: dhaqanada iyo dhaqanka
Marka laga soo tago nidaamyada adag ee caajiska iyo caajiska ah, waxaa xiiso leh in la ogaado qaar ka mid ah kuwii hore hiddaha iyo dhaqanka aroosyada dalkan. Waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan in lagu daro iyaga xafladda kuwa raba inay ku guursadaan Norwey. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan:
Dhar iyo dhar
Dhaqanku wuxuu farayaa in caruusiinta reer Norwey ay timaha xirtaan oo ay madaxa ku xiraan taaj dahab ama lacag ah kaas oo jijimooyin yar yar oo qaab-yar u eg ay ka laalaadayaan
Sida aroosadda iyo aroosadda, dharka caadiga ahi waa suudka gacanta lagu sameeyoama, la yiraahdo xirmooyinka. Dharkaan dhaqameed wuxuu ka kooban yahay shaati cad, jaakad, jaakad, gaagaaban iyo sharaabaad dhererkeedu gaarayo. Waa dharka caadiga ah, laakiin dadka noorwiijigga ah oo dhan uma xirtaan sidaan oo kale maalinta arooskooda waxayna doortaan dharka caadiga ah.
Lamaanaha ka tagaya goobta xaflada, ama soo galitaankooda goobta xaflada, waxaa weheliya dhawaqa dhaqanka Hardanger violins, qalabka ugu soo jiidashada badan ee Muusikada dhaqanka ee norwejiga.
Qeybta muusikada ee lagu sameeyo ku dhowaad aroos kasta waa laxan la yiraahdo Kaalay arooska, U dhigma noorwiijiga socodkii arooska ee caadiga ahaa.
In kasta oo sanadihii la soo dhaafay, haddana waxaa jira cibaado taxane ah oo ilaa maanta la ixtiraamo markay tahay guurka Noorway. In kasta oo aroosyada ka dhaca dalkan guud ahaan ay yihiin kuwo isku dhow oo kaliya qoyska iyo asxaabta ugu dhow la casuumayo, haddana waxaa caado u ah ku tuura hadhuudh galley iyo shaciir lamaanayaasha is guursaday. Markasta oo finan badan oo gabadha saaxiibtiis ah ay qabsan karto, ayaa ifaya mustaqbalka lammaanaha
Horeba xasilloonida guriga, lammaanuhu waa inay fuliyaan taxane cibaado ah oo loogu yeeray aasaaska guur dheer oo farxad leh. Tusaale ahaan, maalinta arooska kadib morgeveve ama "hadiyad subax." Guud ahaan jawharad uu caruusku ku maaweeliyo gacaliyaha
Sidoo kale waa caado in lamaanaha isqabaa ay wax wada beero fir labada dhinac ee wadadaada. Noorway geedahan waxaa la rumeeysan yahay inay astaan ​​u yihiin rabitaanka lamaanaha ee ah inay reer yeeshaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Shuruudaha guurka Noorway
Haye, waxaan ka imid Mexico oo aabbaha 3 carruur ah, waxaan rabaa inaan u haajiro inaan ka shaqeeyo Norway aniga iyo carruurtayda oo aan qaato jinsiyadda Norway.
Waad salaaman tihiin, waxaan nahay lamaane, waxaan heysanaa kaar degenaansho waqti dheer ah xaaskeyga uurka lehna waxaa nooga dhiman 8 bilood, kaliya hal bil ayaan ka maqanahay umulinta iminkana waxaan joognaa Norwey hadii cunuga uu ku dhasho Norway, sidee baan waraaqaha ilmaha ku samee Norwey iyo nafteena sidoo kale
Ku jawaab fadi
Waa salaaman tahay, sidee baan uga imanayaa Ecuador waxaanan jecelahay inaan u safro Norway waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan ku soo geli karo oo keliya baasaboor ama fiiso, waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkayga
Jawaab nelson iguago
anik sheekh dijo
adiga anik vevo espna barcelona trjata lagra mudada aad haysato 24 sano waxaad daahir ka tahay hal bouno ka shaqeynta vevir aniga waxaan la imid qoys family. Isagoo ka fakaraya inaad Norway aado shaqo
Jawaab anik shaikh
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa ogolaansho joogitaan oo rasmi ah Spain. Saaxiibkay wuxuu ka yimid Norway, waanu is guursanaynaa. Halkee ayaan ka codsadaa hal shahaado? ma in lagu tarjumaa norweji? Hadday haa tahay, halkee baan ku sameyn karaa nidaamkan?
Ku jawaab Stephania
olga dibi dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaan aado NORWAY Waxaan haystaa gabadh waxaanan jeclaan lahaa inay mustaqbal ku yeelan karto wadankaan sidayda oo kale annaguba waxaan ka nimid VENEZUELA WAANA SOO SUGAYNAA DALKEENA INAAN ISBADALNO LAAKIIN WELI WAXBA AYAAN SII HELI KARO
Ku jawaab olga toro
Waad salaaman tahay, waxaan ahay reer Colombia waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado shuruudaha ay tahay inaan buuxiyo si aan ugu noolaado ugana shaqeeyo Norwey, aniga iyo seygeyga iyo gabadhayda 15 jirka ah.
Ku jawaab Veronica Cottiz
Waad salaaman tihiin, waxaan ahay reer Cuba waxaanan halkan u joogaa reer Norway si aan isugu midoobo qoyskeyga, waxaan haystaa sharci degenaansho 3 sano ah ... saaxiibkay waa norweji waxaanan leenahay gabar 2 jir ah hadana waxaan dooneynaa inaan guursano laakiin ma ogin dokumentiga aan u baahanahay.
Waxaan ka imid Cuba, saaxiibkayna waa norwiiji waxaan ku guursan karaa Norway